Mareykanka Oo Ka hor yimid Muddo Kordhinta Farmaajo Loo sameeyey – XAMAR POST
Isniintii Shalay Golaha Shacabka ayaa waxay muddo Labo sano ugu dareen Hay’adaha Dawlada inay sii shaqeeyaan,taas oo fal celin ka timid sax ahaanshiyaha arintaasi.
Diidmada Gudoonka Golaha Aqalka Sare Soomaaliya Muddo kordhintaasi ka keeneen kasokoow waxaa jirta iyaduna war kasoo baxay Dawlada Mareykanka.
Madaxa Xiriirka Arrimaha Dibadda ee Aqalka Senate-ka Mareykanka Senator Bob Menendez ayaa qoraal uu barta Twitterka ku daabacay Saacado ka hor waxa yiri “Doorashada in waqtigeeda lagu qabto waxey muhiim u tahay dimoquraadiyad caafimaad leh.
Isagoo Senetorkaan Mareykanka ah sii hadlayey waxa uu sheegay In la naqshadeesto muddo kordhin waxey ka hor imaaneysaa dimquraadiyadda, waxeyna Soomaaliya u horseedi kartaa xasilooni darro.
Sidoo kale Gudoomiyihii hore Ee Maxkamada Sare Soomaaliya Dr Ibraahim Iidle Suleymaan ayaa sheegay in sifo aan sharci aheyn loo maray muddo kordhinta Farmaajo iyo Baarlamaanka labo sano ku darsadeen.
Garyaqaan Iidle Suleymaan ayaa sheegay in Maqnaashiyaha Aqalka Sare go’aanka Muddo kordhinta ay wax saameyn ah abuuri Karin,marka loo eego Awoodii Labada Aqal oo mideysneyn iyo danaha siyaasi ee ku dhex jiray Arinta Muddo kordhinta dhacday.
War ay soo saareen Midowga Murashaxiinta Madaxweyne ayey ku sheegeen in sida ugu haboon ee doorasho dalka uga dhici karto tahay in loo hogaansamo meel marinta Heshiiskii 17 september 2020 kaas oo wadar ogol lagu ahaa in dalka doorasho aado.
Si toos ah weli Xubnaha Beesha Calamaka ee taageera Arimaha Soomaaliya gar wadeena ka ahaa shirkii Afisiyooni kama aysan hadlin muddo kordhinta Farmaajo iyo Hay’adaha kale Dawlada Sameysteen Isniintii shalay muddo Labo sano ahna ay sii joogayaan.
Ganacsade Noqday Madaxweynaha Cusub Ee La Doortay Dalka….